Ubonakaliso obuqhelekileyo kwimvula kunye nebandayo kubanda kakhulu emlonyeni. Ekubeni kwimiqathango yemozulu ekhuselweyo, ukukhusela emzimbeni kuphelile, kwaye umntu uba yinto elula kwiintsholongwane.
Ubushushu busebenze emlonyeni womlomo kuphela kwiimeko apho iimeko zikhethekileyo kwaye zilungile, zibhaliwe malunga ngasentla. Ngamanye amaxesha, ukuba unesimo esilubileyo sempilo, kunye ne-immunity ekhuselekileyo, awukwazi ukukrokrela ukuba i-virus ye-herpes isele ikhona emzimbeni. Ukukhusela okusemgangathweni kumngcipheko emlonyeni kukuqhuba i-prophylaxis jikelele yezifo ze-catarrhal, ukuqinisa ukukhuselwa komzimba, kunye nokusebenzisa i-balms yomlomo.
Ininzi ebandayo ebanda kubonakalisa ngendlela ye-vesicles okanye i-blisters encinci. Emva kokuba inkqubo yokuvuvukala iqala ukuhla, amaninzi emilonyeni yenziwa iilonda ezincinci, ezibuhlungu kakhulu xa zichaphazelekayo. Nge-virus ye-herpes elwa ngokunyanisekileyo kunye ne-cosmetology, kunye neyeza, ngoko unako ukudweba nayiphi na indlela yezi ndlela, kodwa ugijime i-herpes kwaye ugxininiswe unyango luyanconywa kakhulu.
Izonyango zonyango: Kuzo zonke amayeza unyango lwe-herpes, i-Zovirax iyona ethandwa kakhulu, kwaye phakathi kweenguqu zasekhaya kunye nezabhajethi, umntu unokukhetha ukuthambisa ama-acyclovir, asebenza kakuhle.
Izindlela zabantu zokuphatha i-herpes emlonyeni womlomo: le nkathazo kwindawo yomlomo ingaphumeleli kwaye ayikho nhlobo ne-virus ye-herpes. Kwimvula ebanda, ukungabikho kobuncwane kubangela ukomisa nokuqhekeka kwemilomo, ephantsi kweemeko ezingcolileyo kunye nokuba khona koomoya kuya kubakhokelela ekuveleni kweenkqubo ezahlukeneyo ezivuthayo emlonyeni. Kule meko, abantu baya kusinceda, abaye bavavanywa ngaphezu kwesinye isizukulwana.
I-recipe yokuqala: i-toothpaste malunga ne-herpes emlonyeni. Phakathi kweempendulo eziqhelekileyo kunye nekhaya, kufuneka ubeke ingqalelo kwi-toothpaste elula, enokufumaneka kwiyiphi indlu yokuhlambela. I-Toothpaste inefuthe elincinci lokuma. Ngokukhawuleza ukuba izibonakaliso zokuqala zokubanda emlonyeni zibonakala, ngokuqhelekileyo zivakalelwa kwiindawo zomlomo, inani elincinci lokutshiza imilenze lisetyenziswe ngaphambi kokulala.
I-Recipe: senza i-cauterize iqanda eliqhelekileyo ngeoli. Indlela esebenzayo ngendlu-ndlela yokumisa iinkqubo zokuvuvukala, kunye nokukhawuleza ukukhawuleza kwebanda lokubanda - kukukhupha i-cold ejwayelekile kunye namafutha abalulekileyo. Xa ukhetha le ndlela yokonyango, qi ni sekise ukuba usebenziso lweoli oluyimfuneko aluyikho ngokweqile - kuya kubakho inqaku elaneleyo le-cauterization ye-foci ye-inflammation 1-2 ngamaxesha ngosuku lokuqala lweentsuku ezi-2-3. Kule njongo, iioli eziyimfuneko kakhulu: ioli ye-tea, i-eucalyptus, i-rosemary, i-mint, i-lemon.
I-Recipe: i-tincture emangalisayo yepropolis. Ipropolisovnastoyka - enye isilungiso seqanda eliqhelekileyo, kodwa kufuneka ungayisebenzisi kakubi nayo. Emva kokuba usitshise indlu yeqanda ngepropolis, emva kwemizuzu eyi-10 ukuya ku-20 kufuneka usebenzise ukhilimu oya kunciphisa ulusu, kungcono ukuba ukhilimu unemifuno yemvelo yemifuno.
Iingcebiso ezilungileyo zokuvusa kusasa
ICress Cress (Kong Xin CAI) ngegalikhi
Luhlobo luni lobuncwane olungcono?
Ishukela eliyingozi kwimpilo yabantu?
Ukwabelana ngesondo ngomhla wokuqala: indlela yokwenqaba umntu, ukuze ungabhubhisi ubudlelwane
Inkukhu ethosiweyo negalikhi
Sinokuhlangabezana njani nothando lokwenene?
Ukunyamekelwa kwesikhumba kunye neenwele
Indlela yokukhulisa unyana njengendoda, ukuba unomama ongatshatanga